Foara eny Andohatapenaka: mitodika aty amin’ny ranomasimbe Indianina ny BNI | NewsMada
Foara eny Andohatapenaka: mitodika aty amin’ny ranomasimbe Indianina ny BNI
Nisokatra, nanomboka omaly mitohy anio sy rahampitso ao amin’ny Voara Andohatapenaka, ny “Foara momba ny toekarena aty amin’ny Nosy ranomasimbe Indianina” (FEIOI), andiany faha-11, miaraka amin’ny fampisehoana « Voatra », andiany fahadimy. Mikarakara ny hetsika ny Vondron’ny antenimieran’ny Varotra sy ny indostria aty amin’ny ranomasimbe Indianina, hampirindra sy hanamora ny fifandraisan’ny samy mpandraharaha aty amin’ny ranomasimbe Indianina,
« Ny fisian’ny vondrona Axian sy ny vondrona Ciel manana petra-bola ao amin’ny BNI no manosika anay mandray anjara amin’ity foara ity. Ao anatin’ny tanjona apetrakay ny fanampiana ireo mpandraharaha aty amin’ny ranomasimbe Indianina amin’izay tetikasa faritan’izy ireo », hoy Ralaimanisa Ndrina, talen’ny fifandraisana ao amin’ny BNI.
Manolotra vahaolana araka izay filan’ireo orinasa madinika sy salantsalany ity banky ity amin’alalan’ireo tolotra samihafa, toy ny Pack Orinasa sy orinasa miaraka amin’ny BNI. Misy tombontsoa omen’ny BNI amin’izany, toy ny fampindramam-bola anatin’ny fotoana fohy sy lavalava.
Avoitran’ny banky hatrany ny traikefany avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka momba ny fitantanana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena : ny « Global Transaction Banking ». Hahazoana manampy ny tsirairay izany, ho an’ireo maniry hanitatra ny fandraharahany any ivelany. Tanjona ny hahamora ny fifampiraharahana sy ny fifandraisana.
Manana ny anjara toerany koa ny olon-tsotra, mandritra io fotoana io, amin’ny alalan’ny tolotra mifanaraka amin’izy ireo, toy ny fampindramam-bola Vina, Vaika, sy Malaky. Mihena 2 % ny zana-bola, mandritra io foara io.